Wake Wezwa Ngeplone? Izinyawo Eziyisithupha Ziyenyuka? | Martech Zone
Wake Wezwa Ngeplone? Izinyawo Eziyisithupha Ziyenyuka?
NgoMsombuluko, Agasti 2, 2010 NgoMgqibelo, Okthoba 25, 2014 Douglas Karr
UMichael uthumele kubhulogi ngoMeyi, lapho evakashele I-CMS Expo, Lokho Plone kwakungelinye lamathrekhi lapho. Plone? Yini i- Plone? Ngisanda kuthola…
IPlone iphakathi kwe- phezulu i-2% yawo wonke amaphrojekthi wemithombo evulekile emhlabeni wonke, ane Abathuthukisi abangama-200 futhi bangaphezulu kuka-300 abahlinzeki besixazululo emazweni angama-57. Iphrojekthi yathuthukiswa ngenkuthalo kusukela 2001, iyatholakala nge izilimi ezingaphezu kwezingu-40, futhi ine irekhodi elihle kakhulu lezokuphepha yanoma iyiphi i-CMS enkulu. Iphethwe yiPlone Foundation, i-501 (c) (3) engenzi nzuzo, futhi iyatholakala kuzo zonke izinhlelo ezinkulu zokusebenza.
I-Plone uhlelo lokulawula okuqukethwe olunamandla amakhulu. Ngaphandle kwazo zonke izici zohlelo lokuphathwa kokuqukethwe, kukhona okumbalwa okuvelele:
Ukwehluka okukhulu - akuvamile ukuthi ukusetshenziswa kwePlone kube namakhulu ezinkulungwane noma izigidi zamakhasi. Lokhu kuhle kungalawuleki ezinhlelweni eziningi zokuphathwa kokuqukethwe.
Ukuhamba Ngokwezifiso Nokuvunywa - izinqubo eziyinkimbinkimbi kunazo zonke zokuhlela, ukuhlela nokuvumela zingenziwa kalula. Kumaklayenti ebhizinisi, lokhu kunamandla amakhulu kakhulu.
Ijubane nokulula - I-Plone iyashesha ngendlela emangalisayo ekusebenzeni kwamakhasi futhi i-interface ilula ngokwedlulele futhi iyasebenziseka kumsebenzisi ojwayelekile.
Njengamaphrojekthi wemithombo eminingi evulekile, iPlone ayinawo umphakathi wayo ongajwayelekile wabathuthukisi nokulanda ukwengeza. Kukhona cishe 4,000 izengezo etholakala ekhosombeni le-inthanethi ukunweba ukusebenza kokufaka kwakho - kufaka phakathi ukubhuloga, ukwenza imephu, ukuhamba komsebenzi, ukusakazwa kwemidiya namathuluzi wokuxhumana nomphakathi.
Njengoba ngibhala okuthunyelwe kwebhulogi, kuhlala kubonakala kunohlobo oluthile lokuxhumeka kwe-Indiana. IPlone ayihlukile. UCalvin Hendryx-Parker uyilungu lebhodi le- Isisekelo sePlone futhi ngilapha eFortville, e-Indiana. Unkosikazi kaCalvin, uGabrielle Hendryx-Parker wasungula inkampani, i-Six Feet Up, ngo-1999 eSan Francisco futhi bathutha inkampani yabeluleki i-International lapha e-Indiana. UGabrielle ubuye abe ne-MBA kwezokumaketha nobuholi kusuka e-EM Lyon, eFrance.
Ngivakashile Izinyawo Eziyisithupha Ziyenyuka ngenyanga edlule futhi wahlabeka umxhwele. Isikhala sabo sehhovisi esilungisiwe enkabeni yedolobha iFortville yindawo emangalisayo. Banesikhungo sabo sedatha encane kakhulu esinama-generator enza isipele nokufakwa kwe-fiber ukuhambisana nokufakwa okuyisisekelo kwamakhasimende abo ku- Izikhungo zeLifeline Data. Banikela ngokubamba, ukuthuthukisa inkambiso, izinsizakalo zokuhlanganisa, nokwakha ukufakwa kwePlone ezinkampanini zeLife Science, Higher Learning futhi cishe yonke eminye imboni emhlabeni jikelele.
Izinyawo eziyisithupha phezulu zisanda kwethula iSolrIndex 1.0, umkhiqizo wePlone / Zope ohlinzeka ngamakhono wokucinga athuthukisiwe ngokusebenzisa amandla Solr, ipulatifomu yokusesha yebhizinisi evulekile yomthombo ovulekile evela kuphrojekthi ye-Apache Lucene. ISolrIndex iza nokusha okunamandla namakhono okusesha asabekayo. ISolrIndex iyanwetshwa ngokwakhiwa, okusho ukuthi inamandla okuhlanganisa nezinye izinkomba namakhathalogi. Lezi yizindaba ezinhle zamasayithi adinga ukuhlinzeka ngamakhono okusesha kuwo wonke amakhosombe amaningi.
Izinyawo Eziyisithupha manje sezinabasebenzi abangaphezu kwama-20 futhi ziqhubekile nokurekhoda ukukhula kwamadijithi amabili unyaka nonyaka selokhu kwethulwa. Kuyisipho kubuchwepheshe nokusekelwa abakunikeza amakhasimende abo. Izinyawo Eziyisithupha Ziphinde ziphathe iPlone Tune-Up Day… umcimbi wanyanga zonke, wosuku lonke, weqiniso wokusiza umphakathi wasePlone.
Tags: ibhulogiCMSuhlelo lokuphatha okuqukethweizinhlelo zokuphathwa kokuqukethweamasentimitha amakhulumappingukusakazwa kwabezindabathandaizinyawo eziyisithupha phezuluAmafomu okusebenza
Umthetho Obaluleke Kakhulu Kuma-Social Media PR
Umvuzo ngokuzimela, ubuciko kanye nenhloso